Megalithic ဘုရားကျောင်းများ | ခရီးသွားသတင်းများ
Malta Megalithic ဘုရားကျောင်း
Mariela Carril | 30/09/2021 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 30/09/2021 19:42 | မော်လ်တာ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကမ္ဘာကြီးကအများကြီးရှိတယ် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများ၎င်းကိုလူသိနည်းသူများအနက်အများစုကယူဆသည်။ မော်လတာသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့် the megalithic ဘုရားကျောင်းများမရ။ သူတို့ကိုသင်သိပါသလား။ သူတို့ကမင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးလား။
မော်လတာသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သော်လည်းလူများစွာနေထိုင်သည့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်၎င်း၏နွေးထွေးသောရာသီဥတုကြောင့်ယနေ့ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်သောဤထူးဆန်းသောပထဝီအနေအထားတွင်သုံးမျိုးရှိသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးနှင့်အဆန်းကြယ်ဆုံးများထဲမှ Megalithic ဘုရားကျောင်းများစွာ
2 Malta Megalithic ဘုရားကျောင်း
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အီတလီ၏တောင်ဘက်တွင်လွတ်လပ်သောပြည်နယ် ၎င်းသည်၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံအသီးသီး၏သနားကြင်နာမှုကိုခံခဲ့ရသော်လည်း ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမှန်တကယ်လွတ်လပ်သည်။ အဲဒါတစ်ခု ကျွန်းပြည်နယ် ကျွန်းသုံးကျွန်း၊ Malta ကိုယ်တိုင်၊ Gozo နှင့် Comino တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အခြားကျွန်းငယ်များလည်းရှိသည်။
Malta ၏ရာသီဥတုသည် နွေရာသီတွင်ပူပြီးဆောင်းရာသီတွင်မိုးအနည်းငယ်ရွာသည်။ အဲဒါကြောင့်ခရီးသွားတွေအများကြီးသွားကြတယ်။ ၎င်း၏ကမ်းခြေများနှင့်သိသာထင်ရှားပြီးအလွန်စူးစမ်းလိုသောဤ megalithic ဘုရားကျောင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
မော်လ်တာတွင်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများအဖြစ်ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြုသော Malta တွင် megalithic ဘုရားကျောင်း ၇ ခုရှိသည်၎။ ၎င်းတို့သည်မော်လ်တာနှင့် Gozo ကျွန်းတွင်ရှိသည်။ ပထမတွင် Hagar Qim, Mnajdra နှင့် Tarxien, Ta'Hagrat နှင့် Skorba ဘုရားများရှိနေစဉ် Gozo ၌ Ggantija ၏ကြီးမားသောဘုရားကျောင်းနှစ်ခုရှိသည်။
အားလုံး သမိုင်းမတင်မီသမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ ဘီစီစတုတ္ထနှင့်တတိယထောင်စုနှစ်များအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးသောကျောက်တုံးများတည်ဆောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့၏ပုံသဏ္andန်များနှင့်အလှဆင်မှုများကိုအထင်ကြီးနေကြသည်။ အမှန်တရားမှာရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုစီသည်ထူးခြားပြီး၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသောနည်းပညာအောင်မြင်မှုအတွက်လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထူးပြုပညာရှင်များကအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတစ်ခုစီသည်မတူညီသောနည်းစနစ်၊ အစီအစဉ်နှင့်ပီပြင်စွာရှိသည်ဟုဆိုသည် အချို့သောစရိုက်လက္ခဏာများရှိသည် ရှေ့မှ elliptical patio နှင့်ရှိုက်မျက်နှာစာကဲ့သို့ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဝင်ပေါက်သည်မျက်နှာစာအလယ်၌တည်ရှိပြီး၊ ခင်းထားသောခြံဝင်းတစ်ခုနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုသို့ဖွင့်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းကိုအဆောက်အအုံ၏ဝင်ရိုးတစ်ဖက်စီတွင်အချိုးကျကျပုံစံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဤအခန်းများသည်အဆောက်အအုံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံအခန်းသုံးခန်း၊ တစ်ခါတစ်ရံလေးငါးခန်း၊ ခြောက်ခန်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလျားလိုက်ကျောက်များနှင့်ကြီးမားသောရပ်ကျောက်များရှိသည်အမိုးများနှင့်အရာအားလုံးသည်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာကိုဖော်ပြသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သုံးသောကျောက်ကိုပြည်တွင်း၌ရနိုင်သည် သန္တာကျောက်ဆောင် ပြင်ပနံရံများနှင့်aထုံးကျောက်ပျော့သည် အတွင်းပိုင်းနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက် ဟုတ်ကဲ့၊ အဆောက်အ ဦး တွေမှာအလှဆင်တာတွေရှိသလိုလက်ရာတွေကလည်းသိသာထင်ရှားတဲ့အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြပါတယ်။
ဘာလဲ အလှဆင်ဒြပ်စင် ငါတို့စကားပြောတတ်လား? အပေါက်များ၊ အလိမ်ပုံစံများ၊ သစ်ပင်များ၊ အပင်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသော panel များသည်မပျက်ပါ။ ဗိသုကာဒီဇိုင်းနှင့်အလှဆင်မှုများမှဤရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံအချို့ပြည့်စုံသည်ဟုယုံကြည်သည် ရိုးရာဓလေ့အခန်းကဏ္ သူတို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်
မော်လ်တာ၏ megalithic ဘုရားကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်သောသင်တွေ့ရှိရသည့်အချက်အလက်အားလုံးနီးပါးသည်၎င်းမှလာသည် ရှေးရိုးရှေးဟောင်းသုတေသနပညာမရ။ အရိုး၊ ကြွေအပိုင်းအစများနှင့်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဤသိပ္ပံသည်၎င်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် လူသားများသည်အနည်းဆုံးဘီစီ ၅၂၀၀ ကတည်းကမော်လတာတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မရ။ သူတို့သည်လိုဏ်ဂူများတွင်နေထိုင်ကြသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အိမ်များနှင့်ရွာများအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်းပေါ်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀ ကြာပြီးနောက်ဒီထက်ပိုနည်းပြီးသူတို့ကသူတို့ရဲ့အရိုးစုလိုအရာတွေကိုသာယနေ့ငါတို့မြင်နိုင်သည်။
ခဏတာကြာသောအခါဘုန်းတန်ခိုးကြီးပုံရသည် ဘီစီ ၂၃၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်ဤအံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုသည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းခဲ့သည်။နှင့် အဘယ်ကြောင့်? သစ်တောပြုန်းတီးမှုလွန်ကဲခြင်း၊ မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးခြင်း၊ လူ ဦး ရေပိုများခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့်အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောဘာသာရေး ၀ န်းကျင်နှင့်လူမှုရေးပဋိပက္ခများအပြင်ပြည်ပကျူးကျော် ၀ င်ရောက်လာမှုများလည်းရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မော်လ်တာယဉ်ကျေးမှုကျဆင်းသွားပြီးဘီစီ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ကြေးခေတ်မှလူများ ၀ င်ရောက်လာချိန်အထိဖြစ်သည်။ C ကျွန်းသည်လူသူကင်းမဲ့ခဲ့သည်။
လူသိများဆုံးအပျက်အယွင်းများမှာ Hagar Qim ဘုရားကျောင်းနှင့် Mnajdra တို့ဖြစ်သည်Malta နိုင်ငံ၏အနောက်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်လူသူမရှိသော Filfla ကျွန်းသို့ငါးကီလိုမီတာနီးပါးဝေးသည်။ ဤလွင်ပြင်၌ထုံးကျောက်နှစ်မျိုးရှိသည်၊ Mnajdra တွင်သုံးသောအနိမ့်နှင့်ပိုခဲသောတစ်လုံးနှင့် Hagar Qim တွင်သုံးသောပိုမြင့်ပြီးပိုနူးညံ့သည်။
ဟာဂရိမ် ဆိုလိုသည်မှာ“ ကျောက်ခဲများရပ်ခြင်း” ဟုအပျက်အယွင်းများမပေါ်ပေါက်မီအပေါ်မှအနည်းငယ်ရပ်နေသောကျောက်တုံးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဒီဘုရားကျောင်းကိုဘီစီ ၃၅၀၀ နဲ့ဘီစီ ၂၉၀၀ ကြားမှာအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ် ၎င်းကျွန်းတွင်အကြီးဆုံးကျောက်များရှိသည်မရ။ ဧရာမကျောက်တုံးကြီးသည် ၇ မီတာသုံးမီတာနှင့်တန် ၂၀ ခန့်အလေးချိန်ရှိသည်။
အပျက်အစီးများကို ၁၈၃၉ တွင်ပထမဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပြီး ၁၈၈၅ မှ ၁၉၁၀ ကြားတွင်ပိုမိုလေးနက်သောတူးဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။Mnajdra ဘုရားကျောင်းသည် Hagar Qim ၏အနောက်ဘက်မီတာ ၅၀၀ ခန့်တွင်ရှိသည်ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးကမြင်နိုင်သောအစွန်အဖျားနား၊ ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အ ဦး နှစ်ခု၊ ဘဲဥပုံအခန်းနှစ်ခန်းပါ ၀ င်သောအဓိကဘုရားကျောင်းနှင့်အခြားအခန်းငယ်တစ်ခုပါ ၀ င်သောဘုရားကျောင်းငယ်
နက္ခတ္တဗေဒလေ့လာရေးကျောင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကဝင်ပေါက်သည်အရှေ့ဘက်သို့မျက်နှာမူပြီးဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီတို့တွင်ပထမအခန်း၏ဒုတိယထပ်၏နံရံပေါ်ရှိကျောက်တုံးပေါ်သို့ကျရောက်သည်။ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်နေရောင်သည်အဓိကအခန်းများကိုဆက်သွယ်ထားသောအခန်း၏တိုင်နှစ်ခု၏ထောင့်များကိုတောက်ပစေသည်။
အဲ့ကတည်းကတကယ်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတယ် ဗိမာန်တော်နှစ်ခုစလုံးသည်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်အညီဖြစ်သည် ဥပမာအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်မဟုတ်၊ Hagar Qim ၌အရုဏ်တက်သောအခါနေရောင်ခြည်သည်ဗျာဒိတ်တော်ဟုခေါ်သည့်အရာကို ဖြတ်၍ ၎င်းမှအကြမ်းအားဖြင့်၎င်းနှင့်တူသည်။ လနှင့်မိနစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ disk သည်ကြီးထွားလာပြီးဘဲဥပုံဖြစ်လာသည်။ အခြားချိန်ညှိမှုသည်နေဝင်ချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
အမှန်တရားကဒီနက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေဟာအလွန်ရှားပါးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အဲဒီအချိန်တုန်းကရှေးရိုးရှေးဟောင်းသုတေသနပညာကိုယုံကြည်ရင် .... မှားနေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ အခြားသုတေသီများသည်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစိတ်ကူးများကိုအကြံပြုသည်solstices တွင်နေ၏နောက်ဆုံးအချိန်ကိုပုံသေသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းနေနှင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်၏လည်ပတ်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ကမ္ဘာ၏ဝင်ရိုး၏ထောင့်နှင့်ကွဲပြားသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများကို“ ဘဲဥပုံ၏အစွန်းနှစ်ဖက်” ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည် ၂၃ ဒီဂရီနှင့် ၂၇ မိနစ်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်မဟာစက်ဝန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီး၎င်းညှိချက်များသည်အသက်မပြည့်လျှင်၎င်းတို့ပြောင်းလဲနေသောအစွန်းနှစ်ဖက်ကြောင့်တိကျသောအမှားအတိုင်းအတာတစ်ခုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဤအမှားမှ၎င်းကိုတွက်ချက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်မည့်ရက်အတိအကျ.
ထို့ကြောင့် Mnajdra ဘုရားကျောင်းများကိစ္စတွင်သူတို့၏ alignment သည်ကောင်းသော်လည်းအလွန်မပြည့်စုံပါ။ ထို့ကြောင့်တွက်ချက်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသောညီမျှခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀၀ တွင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဘီစီ ၃၇၀၀ တွင်တစ်ကြိမ်နှင့်အစောပိုင်း ၁၀.၂၀၅ ဘီစီတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကပြောထားတဲ့စကားထက်အများကြီးအသက်ကြီးတယ်။
အလွန်ရှားပါးသည်။ သို့သော်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာသည်ကြယ်များနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးထက်ကျော်လွန်သည် မော်လ်တာ၏ megalithic ဘုရားကျောင်းများသည်သင်္ချာနှင့်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှု၏ကြီးမားသောအတိုင်းအတာကိုဖော်ပြသည်မရ။ မင်းသိလား? ကြယ်၊ သင်္ချာနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြီးမြောက်သောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပတ်သက်သောအရာများသည်ရှေးရိုးရှေးဟောင်းသုတေသနမှမကျန်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဘုရားကျောင်းတွေနဲ့တူတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရာမှမရှိပါဘူး ၎င်း၏ဖြစ်တည်မှုသည်ပဟေိဆန်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုငါတို့မေ့လို့မရဘူး Hal Saflieni ဘုရားကျောင်းများအဖြစ်လူသိများ Hypogeumမရ။ ၎င်းတွင်မြေအောက် ၁၂ မီတာနက်သောအဆင့်သုံးဆင့်၊ အောက်သို့ဆင်းသောလှေခါးနှင့် Oracle နှင့် Sancta Sanctorum ဟုခေါ်သောအခန်းနှစ်ခန်းရှိသည်။ အဲမှာလည်းရှိတယ် Tarxien ဘုရားကျောင်း၊ အတွင်း၌ ဧရာမရုပ်ထု မူလအမြင့်နှစ်မီတာခွဲရှိသည့်အတိုင်းနှစ်ခြင်းခံသည် အမေနတ်သမီး။
ဟိ Tas-Silg ဘုရားကျောင်းများနှင့် Skorba ဘုရားကျောင်းများနှင့်ထူးဆန်းသောသံလမ်းများသည်ကြမ်းပြင်မှထွင်းထုထားသည် မော်လ်တာဒေသအသီးသီး၌တွေ့ရပြီးပင်လယ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းသည်။ ၎င်းတို့သည်ဘီးအမှတ်အသားများနှင့်တူသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချေ။ သူတို့ကဘာလဲ။ အင်း၊ နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု
သံသယဖြစ်စရာများ၊ တေးဂီတများ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ ယူဆချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိလိုလျှင်မော်လ်တာ၏ megalithic ဘုရားကျောင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာစာအုပ်များနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးချဉ်းကပ်မှုသည်ဂန္ထဝင်လက်မှဖြစ်သည်။ Erich Von Däniken
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » မော်လ်တာ » Malta Megalithic ဘုရားကျောင်း